MSF oo xirtey xarunteedii caafimaadka ee Xadaar ka dib markii ay ka dhacdey arrin dhinaca ammaanka la xiriirta - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
12.03.2013 | Qeybta Guud, Taakulada Soomaalida
Soomaaliya – Hay’adda Dhakhaatiirta ann Xuduuda Laheyn ee (MSF) oo xirtey xarunteedii caafimaadka ee Xadaar ka dib markii ay ka dhacdey arrin dhinaca ammaanka la xiriirta
Ururkan bani’aadamnimada ma sii wadi karo hawshiisa maaddaama shuruudihii ugu hooseeyey ee ammaanka bukaannada iyo shaqaalaha aan la isku hubin
Nayroobi, 12 Maajo 2013 – Waxaa la hakiyey hawlihii caafimaadka ee ka socdey xarun caafimaad oo uu hawsheeda wadey ururka Médecins Sans Frontières/ Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn (MSF) oo ku taalley Xadaar, oo ah xaafad ka tirsan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaa sidaa maanta sheegey ururka caalamiga ah ee bani’aadamnimada ee MSF.
28kii Jannaayo, ayaa laba ka mid ah ilaaliyeyaasha ammaanka ee xarunta caafimaadka ay xabado is-dhaafsadeen, sida muuqateyna waa dhibaato ka dhalatey khilaaf shakhsi ah. Labada ilaaliye ee ammaanka ayaa dhacdadaas ku dhaawacmey. Nasiib wanaag is-rasaaseynta ayaa dhacdey waqti aan ahayn saacadaha ay xarunta caafimaadku furan tahay mana jiro qof kale oo ku dhaawacmey.
Islamarkii ay arrintu dhacdeyba, MSF waxaa ay hakisey hawlaheedii iyada oo isku dayeysa in ay soo celiso shuruudaha dhinaca ammaanka ee ugu hooseeya ee ay ugu baahan tahay sii wadidda hawsheeda. Laakiin maanta ayaa ururku ku khasbanaadey in uu ku dhawaaqo xiritaanka xarunta caafimaadka.
“Arrinta dhacdey ma yareysaneyno,” ayaa uu yiri Michel-Olivier Lacharité, oo ah Maareeye Barnaamijyada MSF. “Iyada oo maalin kasta yimaadaan boqolaal qof, ayaa arrinta waxaa ay noqon kartey mid dhibaato badani ay ka dhalata. Iskama sugi karno in ay waxyaabahan oo kale ay mar kale dhacaan. Bedqabka bukaannada iyo shaqaalaha ayaa shardi u ah hawlaheenna caafimaadka. Waana taas sababta aan maanta ugu khasbannahay in aan joojinno hawshii aan ka wadney Xadaar, in kastoo baahiyo caafimaad ay weli qabaan dadweynaha.”
Xarunta caafimaadka ee Xadaar ayaa MSF waxa ay furtey bishii Abriil 2012kii si ay daryeelka caafimaadka guud oo lacag la’aan ah, oo ay ka mid yihiin daryeelka hooyooyinka uurka leh iyo dabiibidda caruurta nafaqo-xumadu hayso, u siiso dadka degaanka deggan iyo dadka barokacayaasha ah ee ka soo qaxay degaannadooda ku yaalla meelo kale.
Tan iyo markii la furey xarunta caafimaadka, in ka badan 30,000 qof ayaa heley la-talin caafimaad; 2,300 carruur ah ayaa laga tallaaley jadeeco iyo cudurrada kale ee badanaa carruurta ku dhaca; waxaana 556 carruur ah laga daweeyey nafaqo-xumo ba’an.
Muqdisho, waxaa ay MSF ka hawl-gashaa cusbitaal 40 sariirood qaada waxaana ay weli ay daryeelka bukaan-socodka ku bixisaa xaafadda Jasiira ee magaalada. MSF waxaa ay sidoo kale tan iyo 2007dii ka shaqeyneysey cusbitaalka guud ee Dayniile, oo ku yaalla daafaha caasimadda. Ururku waxaa uu sidoo kale hawlo caafimaad ka wadaa xaafadaha Xamar-Weyne, Xamar-Jabjab, Waaberi, Yaaqshiid iyo Dharkenley oo ka tirsan Muqdisho, iyo sidoo kale magaalada Afgooye.
MSF waxaa ay si joogto ah Soomaaliya uga shaqeyneysey tan iyo sanadkii 1991, waxaana weli ay waddaa in ay daryeel caafimaad oo nafaf lagu badbaadiyo siiso kumanaan qof oo Soomaali ah oo ku nool toban gobol oo dalka ka tirsan, iyo sidoo kale dalalka deriska la ah ee Kiinya iyo Itoobiya.
Sanadkii 2012, MSF waxaa ay dabiibtey ku dhowaad 30,000 carruur ay nafaqo-xumo ba’an hayso ah, waxaana ay 75,000 carruur ah ka tallaashey cudurrada faafa. Kooxaha MSF waxaa ay sidoo kale gacan ka geysteen in hooyooyinkooda ay ka umuliyaan 7,300 carruur ah waxaana ay ku dhowaad nus-milyan talooyin caafimaad ah ku bixiyeen tas-hiilaadkooda caafimaadka gudihiisa.
MSF waxaa ay gebi ahaanba ku tiirsan tahay deeqo shakhsi ah oo ay ku fuliso hawlaheeda Soomaaliya mana aqbasho maaliyad dowlad ka timaadda.
13kii Oktoobar 2011, laba shaqaalaha MSF ka tirsan, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, ayaa laga afduubey xarada qaxootiga ee Dhadhaab ee ku taalla Kiinya. MSF waxaa ay aaminsan tahay in labada qof ee shaqaalaheeda ka tirsan lagu hayo Soomaaliya gudaheeda waxaana aay codsaneysaa in shuruud la’aan lagu sii daayo. Ilaa si ammaan ah looga sii daayo Montserrat iyo Blanca, hawlaha MSF ay ka waddo Soomaaliya waxaa ay ku koobnaanayaan kuwa xaaladaha degdegga ah ee naf-badbaadinta ah oo keliya.
Tags: Banadir, Mogadishu, Somalia, South Central Somalia